ठुलो खुसिको खबर ! नेपालले सिधै टि-२० बिश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउँने - News20 Media
January 23, 2020 January 23, 2020 N20LeaveaComment on ठुलो खुसिको खबर ! नेपालले सिधै टि-२० बिश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न पाउँने
काठमाडौं : नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आईसीसी टी–२० विश्वकप २०२१ को सिधै ग्लोबल क्वालिफायरमा पुगेको छ । बिहीबार आईसीसीले सार्वजनिक गरेको विश्वकप २०२१ को प्रक्रियामा नेपालले क्षेत्रीय छनोट खेल्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । भारतमा हुने विश्वकपका लागि नेपालले अब एसिया छनोट खेल्नु पर्ने छैन् ।
आईसीसीको टी–२० बरियताको १२ औं स्थानमा रहेका कारण नेपालले सिधै ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको हो । नेपालसँगै जिम्बाबे, युएई र हङकङ पनि पुगेका छन् । आईसीसीको वरियताका शीर्ष ८ टोली स्वतः ग्लोबल छनोटमा पुग्नेछन् भने जनवरी १ सम्म बरियताको शीर्ष १२ भित्र अटाउने एसोसियट टोलीले पनि क्षेत्रीय छनोट खेल्नु नपर्ने भएको छ ।
ग्लोबल छनोटबाट उत्कृष्ट चार टिमले विश्वकपमा सहभागिता जनाउन पाउने छन् । ग्लोबल छनोट खेल्ने १६ मध्ये अन्य चार टोलीले क्षेत्रीय प्रतियोगिता खेलेर आउनु पर्नेछ । ग्लोबल छनोट २०२१ मार्चदेखि जुलाई सम्म हुनेछ । २०२० को अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा भने नेपाल ग्लोबर क्वालिफायरबाट आउट भएको थियो ।
थ्रिस्टार-हिमालय शेर्पा र एपिएफ-जावलाखेल भिड्दै
स्मारक ए डिभिजन फुटबलमा आज दुई खेल हुदैछन् । थ्रिस्टार क्लब र हिमालय शेर्पा क्लब तथा विभागीय टोली एपिएफ र जावलाखेल युथ क्लबबीच आज खेल हुनेछ । दुवै खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ । दिउँसो १२ बजे थ्रिस्टार र हिमालयनबीच खेल हुनेछ । सात खेलबाट शेर्पाले १ जित ४ हार र ३ बराबरीको नतिजा सहित ७ अंक जोडेको छ । शेर्पा तालिकाको ११ औं स्थानमा छ ।
यता, उपाधि होडमा रहेको थ्री स्टार पनि शेर्पालाई पराजित गर्दै उपाधि होडमै रहन चाहन्छ । अन्तिम खेलमा महत्वपूर्ण तीन खेलाडी थप्दा थ्री स्टारले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङसँग २–२ को बराबरी खेलेको थियो । थ्री स्टार ३ जित, २ बराबरी र दुई हार सहित ११ अंक जोडेर तालिकाको पाचौं स्थानमा छ ।
यसैगरी आजकाे दोस्रो खेल दिउँसो तीन बजे एपिएफ र जवालखेल बीच हुनेछ । लिगको अंक तालिमा एपिएफ अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ । एक खेल जितेको एपिएफ ४ खेलमा हार ब्यहोरेको छ भने दुई खेलमा बराबरी गरेको छ ।
सुरुवाती पाँच खेलमा अपराजित रहेको जावलाखेल अन्तिम दुई खेलमा भने पराजित छ । उसले २ जित, ३ बराबरी र २ हारको नतिजा सहित ९ अंक जोडेर तालिकाको आठौँ स्थानमा छ ।